Marquesas Islands, paradhiso | Kufamba Nhau
Marquesas Islands, paradhiso
Mariela Carril | | Nzvimbo dzekushanya, Inotungamirira
Makomo, akasvibirira zvinomera zvakasvibira, gungwa rebhuruu, mahombekombe uye zuva, ipfupiso yakanaka yeiyo iyo Marquesas Islands. Ichi chitsuwa iri makiromita chiuru nemazana mashanu kubva kuTahiti uye iparadhiso yechokwadi.
Kana iwe uchida iyi mhando yenzvimbo, iyo tsika yePacific, rarama mafaro uye unakirwe nekunze zviitiko, famba uko Gauguin naBrel vakafamba kana kukwira mune inoshamisa pasi pemvura nyika, saka kwaunoenda ndiko Marquesas, sezvedu nhasi. Apa toenda!
Iwo zvitsuwa zviri makiromita chiuru nemazana mashanu kubva kuTahiti uye zvine zvakapoterera zviwi gumi nezviviri, asi zvitanhatu chete zvinogarwa. Nhasi vane huwandu hwevanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemazana uye inzvimbo yayo yekutonga ndiNuku Hiva.
Zvitsuwa izvi musanganiswa wakanaka wemahombekombe ejecha dema ane nzvimbo dzinorota. Iva miromo, makumi mipata, makumi mapopoma, saka zviitiko zvavanopa zvakawanda. kutasva bhiza, kukwira makomo, 4 × 4 jeep kutasva, kudhizaivha, snorkeling… Uye sezvatakataura pamusoro apa, maartist Gauguin naBrel vakafamba pano pakutanga kwezana ramakumi maviri vachitsvaga runyararo. Uye vakamuwana nekusingaperi nekuti kunyangwe pano pane makuva ake, muCalvaire Cemetery.
Kusiyana nezvimwe zviwi muFrench Polynesia, pano hakuna madhibhoni kana matombo emakorari anochengetedza mahombekombe. Mwanakomana zvitsuwa zvinoputika yemakona akapinza, emakomo akapinza akamuka kubva pakuputika kwemagma, ine masango nemipata yakadzika. Ndezve chimwe chezvitsuwa zviri kure kwazvo pasirese, kure kure nechero makondinendi mashoma, zvakanyanya zvekuti ivo vane yavo nguva yenguva.
Chitsuwa chikuru cheboka iri Nuku Hiva. Iyo inozivikanwa zvakare seMystic Island uye ine nzvimbo zhinji dzinonakidza: iyo Hakaui Valley Waterfall, wechitatu kumusoro-soro pasi rose, iyo gungwa dema reAnaho, mapako epasi pemvura izvo zvinochengetedza zvinokatyamadza zvinomera nemhuka uye iyo Cathedral yeName Dame nehuni nematombo akavezwa anomiririra chimwe nechimwe chitsuwa. Pano pane guta guru riri Taiohae, iro rinotungamira guta rezviwi.
Nzvimbo yayo yepamusoro ndeyeGomo reTekao, pamamita gumi nemazana nemakumi masere neshanu, uye haina matombo emakorari kana mahombekombe egungwa. Chitsuwa ine pfuma zhinji yezvakaitika kare, Dzimba dzematombo dzePolynesia, masvingo uye tembere. France yakachiwedzera muna 1842. Pakutanga chakatsaurirwa kushambadziro yemasandarwood uye chaive chakamira chema whalers, kuti gare gare chizvipire zvakanyanya kutengeswa kwemichero.
Chitsuwa ichi chine mahombekombe ekumadokero akaomarara, iine madiki madiki anovhurika mumipata yakadzika. Hakuna misha yakatenderedza pano. Icho chiri pamhenderekedzo yekuchamhembe pane iwo maviri akakosha madoko, ane akadzika mabhesi: Anaho naHatihe'u A'akapa. Kudivi rekumaodzanyemba kune mamwe mabheji uye pano pane mamwe madoko. Inland kune mafuro manyoro uko mombe dzinosimudzwa.
Sezvatakambotaura, nzvimbo yekutonga iri Taioha'e, kumaodzanyemba. Wakamboona here Akapona, iyo T yakateedzanaV? Zvakanaka, muNuku Hiva mwaka wechina wakatorwa, muna 2002.
Marquesas Islands akapatsanurwa muzvitsuwa zvekuchamhembe, pane zvisere uye pakati padzo pane Nuku Hiva; zviwi zvekumaodzanyemba, zvinomwe, uye mamwe makomo asingaite zvitsuwa zviri kuchamhembe. Chitsuwa chechipiri chakakosha Hiva Oa, zvakare chitsuwa chechipiri chikuru cheboka uye mukati mezviwi zvekumaodzanyemba.
Heino guta rechiteshi che Atuona uye ino saiti inowanzova chiteshi chekutanga icho ngarava dzinoyambuka Pacific kuenda kumadokero kubata. Tinogona kutaura izvozvo Icho chitsuwa chine nhoroondo zhinji yeboka nekuti ine zvidhori zvekare zveTiki uye yaive nzvimbo yacho kwakafira mupendi Paul Gauguin uye muimbi Jacques Brel. Iyo inozivikanwa zvakare seye Marquesas gadheni nekuti yakasvibira uye yakaorera.
Hiva Ova ane mahombekombe ne mahombekombe nemawere uko kudzika kunoitwa, asi kunyangwe zvakadaro chiri chitsuwa icho dzimwe nguva chinoratidzika kunge chakazviparadzanisa pachacho, chakanyarara, chinenge chakazvimiririra. Guta rayo rinonyanya kukosha iAtuona, kumucheto kwekumaodzanyemba kweTaaao Bay, yakachengetedzwa nemakomo maviri akakwirira pachitsuwa, Gomo Temetiu neMount Fe'ani.
Chimwe chitsuwa chiri Ua Pou, chitsuwa chechitatu pakukura. Iyo ine hombe mbiru dzebasalt, Chigadzirwa chekuputika kwemakomo, ayo akabhabhatidzwa ane zita revarwi vane mukurumbira, Poumaka naPoutetaunui. Muna 1888 yaive mbiru idzi dzakafemera Robert Louis Stevenson kuti vataure kuti dzakafanana mabota emakomo anotarisa kumusoro kumusoro kwechechi, sezvavanotarisa pamusoro penzvimbo yemusha weHakahau, wakanyanya kukosha pachitsuwa ichi.
Ua Huka ndeye runako runoshamisa, anenge mhandara. Kune mabhiza emusango, nyika ine ruvara rwegwenga, mbudzi ... Tahuata ndeyechikamu chayo chitsuwa chidiki iyo inogarwa. Asi inozivikanwa nemukurumbira wekuBritain, Captain Cook, uyo akaishanyira muzana ramakore rechiXNUMX. Inongowanikwa chete nemvura kubva kuHiva Ova saka irwendo rwakakurudzirwa. Mipata yaro yakaorera inotarisisa nzvimbo dzine mvura yakachena, inogara zvakanyarara uye inotora kumba zvinonhuwira zvemuno, iyo Rudo potion sezvavanotaura pano, zana remafuta.
Fatu hiva ine mawere marefu ayo anonyudza mugungwa uye anopa maonero anoshamisa kubva kumusoro. Muna 1937 mutsvakurudzi Thor Heyerdahl nemukadzi wake, vakagara kwechinguva kuti vagare pano uye vakapfupikisa ruzivo rwavo mubhuku. Zvinotaridza kuti kubvira ipapo zvishoma zvachinja. Vazhinji vevagari vayo vanogara mumusha weOmoa nenzvimbo dzakapoteredza, chiteshi chengarava. Iyo Hana Vave nzvimbo inodzivirirwa neakakurumbira Bay yemhandara, wakanaka paunotarisa, kunyanya pakuvira kwezuva ...
Iwe unofarira here zviwi izvi? Kana iwe uchinzwa senge kusangana navo mumunhu saka teerera kune iyo ruzivo runoshanda iyo yandinosiya pazasi, ndichigara ndichiziva kuti iwo zviwi izvo zvisiri mune zvekare French Polynesia nzira yevashanyi: Society Islands, Bora Bora, Moorea, Tuamotu Atolls uye Leeward Islands.
kune zviwi zvitanhatu zvinogarwa uye zvina zvine airport, asi yemuno, kuti ugone kusvika nendege kana nechikepe. Kana iwe ukasarudza ndege iwe unobhururuka kubva kuTahiti nendege dzezuva nezuva kuenda kuNuku Hiva neHiva Oa. Kuti uende kune zvimwe zviwi, iwe unofanirwa kupfuura neumwe weizvi zviviri. Kana, kune rumwe rutivi, ukasarudza kuenda nechikepe, chokwadi ndechekuti chero munhu anofamba nepakati pePolynesia anotora iwe, iwe unongofanirwa kutsvaga sarudzo, semuenzaniso Tahiti Voile et Lagoon kana Poe Charter kana iyo Aranui 5 yekufambisa ngarava, dzinofamba nechikepe kamwe chete pazuva.pamwedzi asi dzakatenderedza 3 euros pasvondo. Kana iwe uine rako rechikepe ipapo unogona kubva kuGalapagos kana kuCook Islands.
kufamba pakati peMarquesas Islands unogona kubhururuka, pakati pezvitsuwa zviviri zvikuru pane pakati peye kana maviri nendege pazuva. Zvitsuwa zveUa Pou neUa Huka hazvina rombo rakanaka nendege dzezuva nezuva. Pfungwa yakanaka ndeye kutenga iyo Marquesas Pass neTahiti Mhepo. Iwe unogona zvakare kufamba nechikepe, hire a local, rent your boat. Kune chikepe chekudyidzana mukati meMarquesas del Sur, inoenda kuchitsuwa cheTahuata neFatu Hiva (kwemazana makumi matanhatu nemashanu emauros rwendo rwekuenda kweawa shanu rwendo).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Inotungamirira » Marquesas Islands, paradhiso